Abiy Axmed: Eritrea ciidamadeeda way kala baxaysa Tigray
Home WARARKA Abiy Axmed: Eritrea ciidamadeeda way kala baxaysa Tigray
Ra’isal wasaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay ciidamada Eritrea ee dagaalka shanta bilood ka socday deegaanka Tigraay ka qayb qaatay iney deegaankaasi ka baxayaan.
Ciidamada Eritrea ayaa garab weyn u ahaa dagaalka ay ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya ku qaadeen xoogagga TPLF ee deegaankaasi ka arriminayey.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen dagaalkaasi kumannaan qof iney ku dhinteen.
Balse dhanka Eritrea kama soo bixin wax xaqiijinaya iney ciidamadeeda deegaanka Tigraay kala baxeyso.
Ciidamada Eritrea iney ku sugnaadaan gudaha Itoobiya waxaa ka dhalatay hadal hayn maadaamaa labadaasi dal ay ahaayeen labada dal oo uu dhex maray dagaal xududdedd aad u culus.
Dagaalka labada dal u dhaxeeyey oo soo afjarmay marka uu hoggaanka dalka Itoobiya uu qabtay Abiy Axmed sanadkii 2018-kii tallaabadaasi oo uu ku muteystay abaalmarinta nabadda caalamiga ee Noble Peace Prize.
Dagaalka deegaanka Tigraay wuxuu billawday bishii November 2020-kii kaddib marki ay xoogagga TPLF ay weerar ku qaadeen kaddibna qabsadeen saldhigga waqooyi ee ciidamada fedelaaka ay ku lahaayeen deegaanka Tigraay.
Xisbiga TPLF oo deegaanka Tigraay maamulayey awooddi siyaasadeed ee ay dalka iyo deegaankaasiba ku lahayeen ayaa hoos u dhacday kaddib marki uu Abiy Axmed uu xilka qabtay, iyaga oo ku doodayey nidaamka federaalka iyo doorkii ay dowladda dhexe ku lahaayeennba in la wiiqay.
Abiy Axmed oo booqasha ku tagay magaalada Asmara ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay “Eritrea iney oggolaatay cidamadeeda ku sugan xadka Itoobiya ku sugan iney la baxdo”, balse ma sheegin xilliga ay la baxeyso.
Hadalka ka soo yeeray Abiy Axmed ayaa imanaya toddobaad un kaddib marki ugu horreysay oo uu qirtay ciidamada Eritrea iney deegaanka Tigraay joogaan, isaga oo sheegay ciidamadu waxay gudaha deegaanka Tigraay u soo galeen ay tahay cabsi ay qabaan iney xooggaga TPLF soo weeraraan.
Ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Eritrea waxaa lagu eedeeyaa iney xadgudub geysteen, iyada oo ay sii xoogeysanayaan cadaadiska caalamiga ah oo ay ka mid tahay Qaramada Midoobay oo lagu hayo Itoobiya laguna dalbanayo in dagaalka Tigray la soo afjaro.
Balse ciidamada Eritrea oo ka baxa deegaanka Tigraay ayaa la sheegayaa iney dagaalka soo afjareyn ilaa laga xallinayo muranka siyaasadeed ee dagaalka iisu beddelay ee u dhaxeeya Abiy iyo TPLF.
Maxaa ka dhacay deegaanka Tigraay?
Shanti bilood ee la soo dhaafay boqollaal kun oo qof oo ku noolaa deegaanka Tigraay ayaa guriyahoodi ka qaxay.
Tani iyo dabayaaqadi bishii November marki xilka laga tuuray TPLF Abiy Axmed wuxuu ku dhawaaqay dagaalka Tigraay inuu soo gabagaboobay, balse weli qayba ka mid ah deegaankaasi waxaa ka socda dagaallo.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ciidamada Eritrea waxay ku eedeeyeen iney xasuuq ka geysteen deegaanka Tigraay gaar ahaanna magaalada Axum. Gabood fallada ay geysteen oo ay kooxaha xuquuqal isnaaska ku sheegeen iney ka mid yihiin dil loo geystay dad rayad ah oo aan hubeysneyn, kufsi dumar loo geystay iyo dhac iyo boob ay u geysteen hantida dadweynaha iyo midda shacabka.
Hase yeeshee dowladda Eritrea ayaa gaashaanka u daruurtay eedda ciidamadeeda loo soo jeediyey, gaar ahaanna gabood fallada la sheegay iney Aksum ka geysteen iyada oo eeddaasi ku tilmaan tahay “been abuur aan waxba ka jirin”.
Xoogagga TPLF sida oo kale waxaa loo soo jeediyey eedeymo la xiriira iney xadgudubyo geysteen.
Previous articleKORRIINKA ILMAHA & QAYBAHA UU U KALA BAXO
Next articleXogta Markab Israel leedahay oo Iran duqaysay